Guddiga Qaban-qaabada Shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug oo la kulmay Bulshada deegaanka Huurshe – Radio Daljir
Luulyo 27, 2019 5:22 g 0
Guddiga qaban-qaabada shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug ee dhawaan ay magacaawday waraaradda arrimaha gudaha, federaalka iyo dib-u-heshiisiinta oo socdaal ku maraya deegaannada dowlad gobaleedka Galmudug ayaa maanta waxa ay gaareen deegaanka Huurshe.
Hoggaamiyaasha Culumaa’udiinka iyo Bulshada Deegaanka Huurshe ayaa si diiran u soo dhaweeyey xubnaha guddiga oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga, Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyow.
Guddiga ayaa reer Huurshe uga mahad celiyey soo dhaweynta diiran iyo marti-gelinta weyn, waxa uuna u bandhigay qorshaha iyo Casuumaadda shir-weynaha dib-u heshiisiinta Galmudug ee gogoshiisu ka fidsantahay Caasimadda Galmudug ee Dhusamareeb.
Culimada, Madaxda Dhaqanka iyo Bulshada Huurshe ayaa balanqaaday in ay kasoo qeyb gelayaan shir-waynaha, gacan-buuxdana ku siin-doonaan Guddiga hir-gelinta shirka si xal waara loo gaaro, looguna diyaar garoobo dhismaha Galmudug loo dhanyahay.
Guddiga qaban-qaabada shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa socdaalkooda horay ugu soo maray Balanbal iyo Caabuud-waaq, waxaana qorshohoodu yahay in ay maraan dhammaan deegaannada Galmudug si ay bulshada ula wadaagaan casuumaadda gogosha dib-u-heshiisiineed.
Shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa Dhuusamareeb ka furmaya August 05/2019, waxaana si wayn u socda diyaar garowga bulshada Galmudug ay ugu jirto ka qayb galka gogoshaas muhiimka u ah dhismaha hey’adaha dowladeed ee Galmudug.